Ubungcali busimahla, oovimba abakho ... | Martech Zone
Ubungcali busimahla, oovimba abakho…
NgoMvulo, Septemba 25, 2006 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Ndigodukile namhlanje. Andiziva mnandi- ndicinga ukuba zininzi, zininzi, iiyure zomsebenzi noxinzelelo ziyandifumana. Ndisonge esofeni umbane uphume. Inokuba mandundu ngakumbi ukuba kuyanetha kwaye kuyabanda.
Ndinexesha lokufunda ndilale ngale ntsasa ukuzama ukushukumisa nayiphi na into endinayo. UTechZ uphawule ngazo zonke iincwadi endizifundayo… zihlala zingaphantsi ko-3. Ndifunda ezi-3 ngoku kwaye ndinama-2 ngaphezulu okulindileyo emva koko. Ndiyakuthanda ukufunda. Icoceka intloko yam kwaye indonwabisa ngakumbi kunokubukela imovie okanye umabonwakude. Ndixelela abantwana bam ukuba into emnandi ngokufunda kukuba uza kupenda umfanekiso okanye imovie entlokweni yakho. Xa ndisiya kubona imovie ebhalwe malunga nencwadi, ndihlala ndiphoxekile.
Ndiyaphuma… kwaye ndinemizuzu engama-30 okanye eshiyekileyo kwiLaptop yam. Kwaye ummelwane wam kungekudala angandifumana ndixutha umzila wakhe (ungakhuselekanga, kunjalo). Njengoko ndifunda ndiye ndacinga, kwaye ndifuna ukubhala ngayo.
Nantsi ithiyori yam… ulwazi alufanelekanga njengoko lwalunjalo ngaphambili. Nge-Intanethi, ulwazi luyabiza kwaye lubiza kancinci ngowesibini. Iintsuku zokuqesha abacebisi ukuba basixelele into esikuyo kufanele ukwenza kusemva kakhulu kuthi. Endaweni yokuba siqeshe abacebisi ngenxa yoko bakwenzileyo unako yenzele thina.
Izibonelelo ziyanda ngokubaluleka kwaye ulwazi luyancipha.
Ndinolwazi olwaneleyo lokwakha inkampani enkulu. Into endiyisweleyo zizibonelelo-ixesha nemali. Xa ndenza udliwanondlebe nabacebisi ngemibono, ayiqhelekanga ngenxa yoko banako okanye abanako ukundixelela kona. Ngapha koko, ndihlala ndiqonda okungaphezulu kunoko bakwenzayo ngale nto ndiyicelayo kubo. Ukuba ndiziva ndikhululekile xa ndikunye nabo, ndibaqesha ukuba benze lo msebenzi bawenzayo… kuba banako ukujolisa ingqalelo yabo kulo mbandela. Andinakukwazi ukwenza oko.
Kwiminyaka eyadlulayo, bendidla ngokulungisa eyam imoto. Bendiyenzile yonke into ebendizakuyenza emotweni. Ndinexesha, ke bendizokuthenga incwadi ndiyinkqonkqoze. Ngokuya ndisiba mdala, andisakonwabeli ukukrola amaqhuma am ngenxa yoko ndizisa evenkileni. Kufanelekile ukuba ixesha lam libe nomnye umntu olilungisa kunokuba ndilungise mna. Nokuba ixabiso liphezulu kakhulu lolondolozo lweemoto.
Ayilulo ulwalathiso apho yonke into ihamba khona? Masithathe ukuSebenzisa iiNjini zokuKhangela (i-SEO) njengomzekelo. Ndiqinisekile ukuba, xa ndinikwe ixesha, ndingayakha imeko yeebhokisi zesanti, i-tweak kunye nokuzama ukubona ukuba ndinganyuka njani ndiye phezulu kwi-algorithms ye-Injini yokukhangela nganye. Kodwa andinaxesha lalonto. Ngokuqinisekileyo-ayinguye wonke umntu onokufunda ibhlog kwaye aqale ukwenza oko. Ndiyaqonda… kodwa abantu abaninzi banako.
Ulwazi lwe SEO is simahla-kukho ingqokelela yeendawo ze-SEO kunye nebhlog ekwi-Intanethi eqhubeka ngokuthumela iimvavanyo kunye neziphumo zabo. (Ndisebenzise ii-tweaks ezimbalwa kwindawo yam). Andizami ukubeka phantsi Abacebisi be-SEO… banjalo ku fanele imali. Kodwa abayifanelanga imali ngenxa yobungcali babo, baxabisa imali njengesixhobo esibalulekileyo. Benza yonke imihla ukuze kungafuneki!
I-intanethi is i-Superhighway yoLwazi. Ndiyazi ukuba indala kwaye i-cliche, kodwa yinyani. Ukuhanjiswa kolwazi kuya kubiza ixabiso eliphantsi kwaye kungabizi kakhulu. Ukuba ndifuna ukufumanisa indlela yokuphatha ulusu lwam olomileyo lukaJack Russell okanye ndifuna ukwenza isikhokelo se-Ajax… kulungile apho ukuze ndiyijonge.
Njengoko iNet iya iququzelelwa ngakumbi kwaye kulula ukukhangela ulwazi, ndicinga ukuba kubalulekile ukuba sizijonge kancinci 'njengeengcali' nangakumbi 'njengezixhobo'. Ubungcali kuyo yonke indawo kwaye simahla ukuba siyithathe. Izixhobo azikho.
Izizathu ezi-5 zokuba ungafaki umculo wakho okanye iividiyo kwiqela lesithathu
Sep 26, 2006 kwi-10: 26 AM
Ndicinga ukuba le imisila yehobe kakuhle ngoluvo ulubekayo… http://www.telco2.net/blog/2006/09/profiting_from_adjacent_busine.html